Dabrazayit – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
March 16, 2015 /in Barumsa Amantaa /by EOTC Afaan Oromo
vQulqullichi Daawiit Abeeseeloomiirraa baqachuuf kara gaara kanaa akka deeme ibsameera. ( 2 Sam. 15:30)
vGooftaan keenya bakki kadhanaa itti gaggeesse Geeteesemaanii gaara kana jalatti argamti Mat. 26:30-36
vGooftaan keenya kan gara samiitti bahe Dabrazayitiitti akka ture Luq 24:52 H.D.Bu’ootaa 1:12
vKana malees Gooftaan keenya bakka kanatti deebi’ee akka dhufu raajiin himameera. (Zak 14:4)
vGooftaan keenyas waa’ee deebi’ee murteef dhufuu Isaa bakka kanatti bal’inaan barsiiseera (Mar.13:3)
Wangeela Maatiyoos Boq 24:1-36 irratti Duuka bu’ootni Gooftaa yemmuu guyyaa dhufaatii Isaa gaafatanitti guyyaa kana waaqa abbaa malee Ergamootnis ta’ee ilmi namaa akka hin beekne ta’uu ibseera. Barumsi kun Gowwoota biratti madda shakkii ta’ee kan mul’atu dha.Garuu Gooftaan maaliif kana jedhe yoo jennu abbootiin akka nu barsiisanitti fedhiin beekumsa ilmi namaa kan hin murtoofne ta’uu isaa irraa kan ka’e yoo inni jaarraa isaa itti hime bara isaa gaafatuun,yoo ji’a itti himee immoo torbee,yoo torbee itti hime sa’aatii gaafatuun ture. Kun immoo ilmi namaa guyyaan dhufaatii isaa fagoodha jechuun cubbuu akka dalagu waan taasisuufii akka saba bara Qulqulluu Noohi turee jechu dha. Kunis yoo yeroon isaa himama ta’e namni gaabbiif of hin qopheessu waan ta’eefidha.Kanaafuu Gooftaan keenya yeroo kanatti duuka bu’oota Isaaf mallattoowwan bara dhumaa beeksiseeraa.Mallattoowwaan kunis:-
1. Mallattoo Siyaasaa
ØWaraanaa fi Oduu waraanaa addunyaa irratti dhagaa’amuu
ØMarguu baala balasii mootummaa hundeeffachuu Israa’eel.
2. Mallattoo Diinagdee
ØBeela, Hongee fi sochii lafaa suunamii bakka gara garaa irratti argamuu
3. Mallattoo Amantaa
ØAni kiristoosi jechuun namoonni hedduun kan dhufan ta’uu.
ØNamootni kiristoosiitti Amanan gidiraa fi dabarsamanii laatamuu
ØNamni badii bakka Qulqullinaa irratti argamuu
Yeroo mallattoowwan kuniin mul’atan yeroon xumuraa kan qaqqabe ta’uu isaa baruun namootni akka of eeganuuf kan himame waan ta’eef hundi keenya yemmuu dhufaatii Gooftaa keenyaa yaadannu bakki galma keenyaa eessa? jechuun qalbii gaabbiif qopheessuun yeroo hunda qophoofnee kan Gooftaa eegnu ta’uu qabna.
Guyyaan kunis kan akkanatti moggafameef kitaaboleen guyyaa kana dibbifamanu kan wa’ee dhufaatii Gooftaa ibsanii fi ilmaan namaa bara dhumaa fi murtoo guyyaa sana kennamu yaadachuun mootummaa Waaqayyoo isa bara baraatiif akka of qopheessan barsiisuuf waan ta’eef nus mootummaa darbuu tuffachuun mootummaa hin darbineef of qopheessuunyeroo itti kennuu hin qabnu.Kanaafis Waaqayyo jireenya bara baraaf akka geenyuuf nu haa gargaaru.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2015-03-16 08:06:182018-10-26 09:21:21Dabrazayit
Gadaamii Waggoota dhibba toorbaan dura hundeeffame- Gadaamii cuqqaalaa ( Zi... Tajaajilaa Gaarii